बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् त्यसपछि….. – Online Khabar 24
बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् त्यसपछि…..
काठमाडौँ / बिहेको दिन बेहुली अनमाई कार भित्र दुलही राखियो ।
म पनि उनीसँगै गाडि भित्र पसे । उनका साथीहरु बाहिरबाट कोई वाई वाई को इसारा, कोहि रुदै त कोहि बेहुलिलाई हसाउदै थिए ।
बाहुबाजे देखिबाट चलेको रितिरिवाज रे बेहुलीले आफ्नता जनलाई ढोग गरेर साडी दिनुपर्ने रे । यो चलन मलाई कति मन परेन । मन परेन भनेर नि म के गर्न सक्थे बाबू आमा मान्दैन चलेको रितिरिवाज हो त्यैले भनेर हुन्छ भन्छन् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevश्रीमान र छोरालाई बि’च’ल्ली बानाएर हिनेकी आमाको र’ह’स्य खोले पिडित छोराले भन्छन वि’श्वा’स’घा’त भयो घरको अबस्था दयनिय (भिडियो सहित)
nextसत्तरी वर्षको उमेर तर तौल मात्र १२ किलो, छोराले काखमा बोकेर हिड्छन् सधै (भिडियो हेर्नुस)